Kosovo oo beri goosanaysa | WWW.SOMALILAND.NO
Kosovo oo beri goosanaysa
Posted on Febraayo 16, 2008 by weriye1
OSLO (somaliland.no) Kosovo ayaa maalinta axada ah lagaga dhawaaqi doonaa goosasho ay ka goosanayso dalka Serbia. Sidaas waxaa AFP u xaqiijiyey raysal-wasaare Hashim Thaci.
Ayaamahaba waa la sugayey goositaan ay Kosovo ka goosato Serbia. Waxaa taageero arintaa Kosovo ku siiyey Maraykanka iyo EU-da, laakiin Serbia iyo Ruushka ayaa arintaa goosashadda ah si cad uga soo hor jeedsaday.
Waxaa kale oo jirta in EU ay go’aan ku gaadhay in ay dalkaas u dirto 2000 oo boolis iyo sharci-yaqaano iskugu jira. Waxaa la sugayaa in ay soo gaadhaan dalka wiiga danbe, waxaana si ku meel gaadh ahaan ah ay dalka u joogi doonaan 4 bilood. Ujeedadooda kowaadna waxa weeye sidii ay u ilaalin lahaayeen in xaquuqda bini-adaamka la dhowro.
Raysal-wasaare Thaci ayaa ku balan qaaday in qoomiyadda Serbiyanka ah ee Kosovo degan amaankooda la sugi doono. Wuxuu yidhi Kosovo dadka degan oo dhan waxay u noqon doontaa meel u amaan ah. Waxaa kale oo uu intaa Thaci isaga oo magaalo madaxda Pristina jooga raaciyey in dawladda ay ka go’antahay in ay horumar mooyaan ee aanay dib u noqon oo aanay wax yaabihii hore u dhacay ku noqon doonin.
Qiyaas ahaantii ilaa iyo 100 00 oo serbiyaan ah ayaa dalka ku hadhay dagaalkii 1999 kadib.
Goosashadda Kosovo ayaa ah mid ay muddantahay in indho gaar ah ay kula socdaan wadamadda aqoonsi raadiska ah ee Somaliland ka mid tahay. Waxaana xusid mudan in la odhan karo Somaliland mudadii ugu danbaysay waxay martay hab-siyaasadeedka ay raaceen madaxda reer Kosovo. Kaas oo ah in ay ku dhawaadeen dhinaca reer Galbeedka, siiba Maraykanka oo la odhan karo waa ka imika siyaasadda dunida kala wada.
Dhinaca Norway ayaa waxaa la sheegayaa in aanay Norway ka mid noqon doonin dalalka ugu horeeya ee ictiraafka miiska saari doona. Taas oo ay ugu wacantahay jaarka ay la yihiin wadanka Ruushka oo isagu gooni isu taaga aad uga soo horjeeda. Laakiin arintan ayaa waxaa go’aankeeda gacanta laga saaray Raysal-wasaaraha iyo Wasiirka Arimaha dibadda. Waxaana loo malaynayaa in ay in muddo ah ka danbayn doonaan dalalka EU-da ku jira.
Filed under: Dibadda, Norway, Somaliland |
« Manuela oo la eryey Madaxweynaha Somaliland Oo Galabta Socodaal Ugu Kicitimay dalalka Khaliijka siina maray Itoobiya »